थ्रिलर "कैप्टिभ": अभिनेताहरू, भूमिकाहरू, छोटो कथा
फिल्म "कैप्टिभ" अभिनेताहरूले एक भयानक नाटक खेलेका थिए, जसले फिल्मको अन्तमा पहिलो मिनेटबाट दर्शकलाई शंकामा राख्छ। यो राम्रो छ कि यो जासूस थ्रिलर डेन्सी विलेनेउभको बिरामी नदेख्ने, यद्यपि यो हलिवुड अभिनेताले खेलेको थियो। त्यसैले, फिल्म "कैप्टिभ" को नाटक क्या हो?
यो तस्वीर अटलांटा मा फिलिम गरिएको थियो, यद्यपि यो फिल्म पेंसिल्वेनियाका एक सानो शहरमा हुन्छ। दुई परिवारलाई धन्यवाद दिन सँगै भेट्न व्यवस्था प्रबन्ध गर्दछ। यद्यपि, जय तथा अन्त्यका केटीहरू आफ्ना आमाबाबुको माग बिना हिँड्ने निर्णय गर्छन् र चाँडै गायब हुन्छ।
यस कार्यक्रमबाट उत्साहित, बुबा - केलर डोभर र फ्रैंकलिन ब्रेक - अभियुक्त अपहरणकर्ताको बाटोमा छिट्टै। यद्यपि, एलेक्स जोन्स मानसिक रूपमा पागल हुन उत्प्रेरित हुन्छन्, यसको थप - उसले रिहाएको छ, जुन जोन्सको अपराधको प्रत्यक्ष प्रमाण छैन।
डोभर बारम्बार अभियुक्त अपहरणकर्तासँग कुराकानी गर्न प्रयास गर्दछ, केटीहरूको स्थान प्रकट गर्न माग गर्दै। यद्यपि, परिणाम प्राप्त गर्न सकिँदैन। त्यसपछि हतोत्साहित पिताले एलेक्सलाई अपहरण गरे र आफैंलाई एक राक्षसमा घुमाए, बिरामीलाई अत्याचार गरेको हतियारमा दियो।
अन्तिममा यसले उत्प्रेरित गर्यो कि केलरले शुरुवात बाट त्यो पछाडि पछ्याएको थिएन। फिलिमको अन्त्यमा एकदम अप्रत्याशित हुनसक्छ, र अझ सानो अधूरो।
चलचित्र "कैप्टिभ": अभिनेता र भूमिकाहरू। ह्यूग जैकमन कोलर को रूप मा
ह्यूग जैकमन, हलिउडको सबैभन्दा उच्च भुक्तानी अभिनेतामध्ये एक , धेरै वर्षको लागि जानिएको थियो, केवल एक्स-मेन फ्रान्चाइजको लागि धन्यवाद। यद्यपि, गत पाँच देखि सात वर्षमा, कलाकारले आफैलाई बहुमुखी प्रदर्शनकर्ताको रूपमा स्थापित गर्न प्रयास गर्दछ, बोल्ड प्रयोगहरूसँग सहमत छन्।
पहिले उनले जेन वाल्जानलाई संगीत लेस मिस्लेबलमा खेले। यस भूमिकाको खातिर, उसले कसरी सिक्न कसरी सक्यो। त्यसपछि जैकमनले परी कथा "पेंग: यात्रा बाट नेटल्याण्डिया" मा ब्ल्याकबेर्डको भूमिका पायो। एक विशेष प्रयोग नाटक "कैप्टिभ" मा नाटक थियो।
अभिनेता ह्यूज जैकमन र टेरेंस हावर्डले यस फिल्ममा अपहरणित बालिकाहरूको पुर्खाको चित्रमा देखाएको छ। जैकमन दाँत बढ्दै थियो र कडा परिश्रम गरेर रोटी कमाई एक प्राविधिक परिवारको लागि जाने को लागी शबीबी को लागी लगाउनु पर्छ। जब केल्लानकी छोरी डोवर ट्रेसको बिना गायब हुन्छ, फ्रान्कललिन ब्रेकको विपरीत, उसले निर्णायक र हताश पनि व्यवहार गर्दछ। डोभर एक बच्चा को खोज गर्न को लागि एक परेशान व्यक्ति को सताउन तयार छ। अन्तमा, सत्य डवरमा प्रकट भएको छ, तर उनको अपमानजनक कारणले उनी आफैं अपहरणकर्ताको शिकार हुनसक्छन्।
"क्याप्चर": अभिनेताहरू र भूमिकाहरू। फ्रान्सलिनको रूपमा टेरेंस हावर्ड
टेरेंस हॉवर्ड एक थोरै ज्ञात अमेरिकी अभिनेत्री हो, जसले प्रायः "बी" वर्ग चलचित्रहरूमा वा टेलिभिजन सीरीजमा चलचित्र खिचेको छ। तर फिर्ता 2000 को शुरुवातमा सबै चीजहरू फरक थिए। 1 999 मा, हॉवर्ड प्रसिद्ध भएको थियो, रोमान्टिक कमेडी "शेफर" को लागी धन्यवाद। नाटक "भानु र मोशन" मा कामको लागि, अभिनेता "वैनिटी एन्ड मोशन" पुरस्कारको लागि नामाकरण गरिएको थियो।
2008 मा, अभिनेताले फ्रान्जिज "आयरन मैन" को पहिलो भागमा कर्नल जेम्स रोड्सको भूमिका खेले। यद्यपि, महिमा टेरेंसमा गएनन्: हलिवुडमा तिनी एक अभिनेताको रूपमा चिनिन्थे, जसको साथ धेरै समस्याहरू छन्। नतिजाको रूपमा, गम्भीर निर्देशकहरू उनको साथ सहयोग गर्न बन्द भए, र हवर्डर्डले ठूलो स्क्रिनबाट "साउथ साम्राज्य" जस्तो टेलिभिजन साबुन अपरेसनमा सारियो।
फिल्म "कैप्टिभ" अभिनेता हवर्डर्ड र जैम्यानले साथीहरूलाई पनि यस्तै दु: खी खेलेका छन् - उनीहरूले आफ्ना छोरीहरूलाई गुमाए। तथापि, नायक हाउन्डरले यस अवस्थामा घरबाट बाहिर निस्कने मौका पाएनन् जबसम्म अपराधीले शहरको सडकमार्फत प्रतिरक्षाको साथ चलाउछ। केलरले सचिन फ्रैंकलिनलाई सत्यसँग खडा गर्न र उनलाई सच्चा अपहरणकर्ता खोज्न बाध्य पार्नु पर्छ।
जाक Glyllhaal एक जासूस को रूप मा
जेक गोलेहालले "कैप्टिभ" थ्रिलरमा एक जासूस खेलाए। अभिनेताहरू, तपाईंले देख्न सक्नुहुने, चलचित्रमा राम्ररी चिनिन्थ्यो।
जासूस लोकीले बुबाहरूको शोक साझा गर्छन् र सानो केटीहरू पत्ता लगाउन खोज्छन्, तर उनीहरूले आकस्मिकताको स्वागत गर्दैनन् र सबै कुरालाई कानून अनुसार मान्न चाहन्छन्। यसकारण अलगावको पर्खाल उनको र केलरको बीचमा हुन्छ, किनभने ह्यू जैकमनको नायक मानिन्छ कि लुकीले सबैलाई आपराधिक रूपमा पकड्दैन। अन्त्यमा यो जासूस लोकी छ जसले अन्नलाई बचाउँदछ र अपहरणमा संलग्न व्यक्तिलाई मार्छ। र यो अन्तिम फोटो मा लोकी बाट होली डभरको भाग्यमा निर्भर छ।
जेक ग्येलहलले 11 वर्षको उमेरमा फिल्महरूमा अभिनय गरे, तर सन् 2001 मा मात्र तिनले उनीहरूको महिमाको स्वाद महसुस गर्थे जब रहस्यमय थ्रिलर डोनी डारोो स्क्रिनमा देखा परे। त्यसपछि अभिनेता ह्याटवुडमा आफ्नो स्थिति बलियो बनायो, हेथ लेजर सँगसँगै "ब्रोकबेक पर्वत" मा एक चरवाहा-समलैंगिक खेल। अनि निस्सन्देह, गिलनहल को थ्रिलर प्रिंस फारस मा प्रिंस फारस को रूप मा, जसको कलाकार एक नयाँ सेक्स प्रतीक को रूप मा मान्यता प्राप्त भएको थियो, को आलोचना को ध्यान को बिना नहीं रहयो।
उनीहरूको उपस्थिति संग "कैप्टिभ" फिल्मको सम्मान गर्ने कलाकारहरूको अभिनेता पॉल डानो ("जीवन बिताउँदै") र मेलिसा लियो ("द फ्लोर ओलम्पस") ले भाइरस र चाची-मनोविज्ञान खेलाए।
साथै फ्रेममा विलोला डेविस ("दुबई"), मारिया बेलो ("ट्विन टॉवर") र डाइलन मिनिट ("एजेन्ट्स शुच। आई.टी.") देखा पर्यो।
अभिनेता मार्क वेबबर: छोटो फिल्मोग्राफी
शीर्ष फिल्महरू: प्रेम त्रिकोण
"द जवान वोल्फहोउन्ड": अभिनेता जसले फिल्ममा अभिनय गर्यो
पहिलो पटक एक पावर प्वाइन्ट प्रस्तुति कसरी बनाउने
प्रोटिन - उत्पादनहरु कस्तो छ? तरकारी प्रोटिन के मा खाद्य पदार्थ समावेश? पशु प्रोटीन के उत्पादनहरूमा?
बिरालोहरु मा Otitis: लक्षण र कान रोगहरु को उपचार
अपरिहार्य आँखा क्रीम
विस्तारित गुर्दे श्रोणि: कारण, निदान र उपचार
Schrödinger गरेको बिरालो - प्रसिद्ध प्रयोग असत्यवत